Company fampidirana - Ningbo Focusway milina Co., Ltd
Ningbo Focusway milina Co., Ltd dia matihanina maty aluminium fanariana faritra sy ny mpamatsy fanompoana. Manome iray-mijanona OEM fanompoana, avy tooling, maty nanarato, machining, ambonin'ny fitsaboana, ny fitehirizana sy ny entana. Izany koa dia manome vokatra mifandraika hafa sy ny asa fanompoana araka ny mpanjifa 'fepetra.
Focusway locates amin'ny Beilun Ningbo, izay iray amin'ireo zava-dehibe indrindra seranan-tsambo sy ny orinasa fanariana fototry ny Shina. Ny orinasa dia naorina teo an 2013, mitana 13000 120 ㎡and manana mpiasa izao.
Koa satria ny fototra, Focusway fampandrosoana haingana foana isan-taona noho ny orinasa mpamokatra entana izany matihanina afaka, henjana miasa toe-tsaina, ary mahafa-po ny fanompoana mpanjifa. Ary ireo mpanjifa indrindra fa avy any Eoropa sy Amerika anisan'izany malaza orinasa. Karazana orinasa dia manompo ao anatin'izany Mechanical, Auto & Motorcycle, Jiro, Electronic, Public Facilities, sns Izany dia miorina tsara laza.
Focusway mikendry ny ho voalohany-kilasy orinasa iraisam-pirenena, tonga soa mpanjifa avy amin'izao tontolo izao, ary handray talenta bebe kokoa hiaraka aminay!
# 25 Putuoshan Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang, Sina 315806